Qatar Airways ayaa markii ugu horeysay duulimaad ka bilaabeysa Bariga Dhexe si ay u tijaabiso IATA Travel Pass 'Passport Dijital ah'
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Qatar Airways ayaa markii ugu horeysay duulimaad ka bilaabeysa Bariga Dhexe si ay u tijaabiso IATA Travel Pass 'Passport Dijital ah'
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Qadar • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caafimaadka Warka • News • Waajib ah • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Rakaabka diyaaradda Qatar Airways 'Doha ilaa Istanbul waxay noqonayaan kooxdii ugu horreysay ee soo martay barnaamijka' Digital Passport '
Laga bilaabo 11 Maarso, rakaabka ku socda wadada Doha-Istanbul waxay tijaabin doonaan barmaamij dijitaal ah oo bixiya khibrad nabadgelyo, xasilooni iyo xiriir la'aan badan
Safarka Pass waa tusaalihii ugu dambeeyay ee balanqaadka diyaarada ee ah taageerida soo kabashada safarada caalamiga
Rakaabku waxay helayaan macluumaad casriyeysan oo ku saabsan xeerarka COVID-19 ee waddanka loo socdo
Qatar Airways waxay ku faraxsan tahay inay noqoto duulimaadkii ugu horreeyay ee Bariga Dhexe si ay u bilowdo tijaabinta barnaamijka moobiilka cusub ee IATA Travel Pass 'Digital Passport', iyadoo lala kaashanayo Ururka Caalamiga ah ee Gaadiidka Cirka (IATA), Wasaaradda Caafimaadka Dadweynaha ee Qatar, Caafimaadka Aasaasiga ah. Hay'adda Care iyo Hamad Medical Corporation, waxay bilaabmaysaa 11 Maarso 2021.
Rakaabka Qatar AirwaysWadada 'Doha ilaa Istanbul' ayaa noqon doonta kooxdii ugu horeysay ee soo martay barnaamijka 'Digital Passport' kaas oo ujeedkiisu yahay inuu door muhiim ah ka ciyaaro aragtida shirkadda si ay u hesho khibrad safar oo xiriir la'aan, amni iyo xasilooni la'aan ah rakaabkeeda.
IATA Travel Pass waxay hubisaa in rakaabku helaan macluumaadka ugu dambeeya ee xeerarka caafimaadka ee COVID-19 ee wadanka ay u socdaan, iyo sidoo kale u hogaansanaanta qawaaniinta xogta caalamiga ah ee adag si ay awood ugu siiso wadaaga natiijooyinka baaritaanka COVID-19 shirkadaha diyaaradaha si loo xaqiijiyo inay u qalmaan si ay u gutaan safarkooda.
Madaxa shirkadda Qatar Airways Group, Mudane Mr. Akbar Al Baker, ayaa yiri: “Anagoo ah shirkadda duulimaadka adduunka ugu horraysa ee xagga nabadgelyada, hal-abuurnimada iyo khibradda macaamiisha, waxaan nahay u-doodaha ugu caansan ee soo-saarista xalalka dhijitaalka ah si aan uga caawino rakaabka si ammaan ah oo aan muuqan inay maraan kakan -in wax laga beddelo xaddidaadda gelitaanka adduunka oo dhan.
“Waxaan ku kalsoonahay kalsoonida lagu qabo IATA Travel Pass oo ah xalka ugu kalsoonida badan uguna wanaagsan ee ay soo saarto warshadaha iyadoo la siinayo u hogaansanaanta xogta gaarka ah, shuruucda soo gelida muddada dheer iyo awooda lagu bixinayo xalka dhamaadka ilaa dhamaadka. Waxaan ku faraxsanahay inaan safka hore uga jirno tijaabinta barnaamijkan, annagoo ka mid ah kuwa ugu horreeya adduunka iyo duulimaadkii ugu horreeyay ee Bariga Dhexe si ay u tijaabiso tikniyoolajiyadda.
Iyadoo la raacayo sharciyada ugu adag ee asturnaanta xogta, IATA Travel Pass waa tallaabo aad u weyn oo loo qaaday dhanka caddeynta in heerarka caalamiga ee ICAO ee baasaboorrada dijital ah ay shaqeeyaan. Waxay sidoo kale gacan ka geysan doontaa aasaaska dawladaha adduunka oo dhan inay isugu yimaadaan horumarinta shuruucda jaangooyooyinka ah si loo yareeyo hawsha casriga ah ee hadda ka jirta guud ahaan warshadaha safarka caalamiga ah. Iyadoo lala kaashanayo Ururka Caafimaadka Adduunka, IATA waxay sidoo kale ku hawlan tahay caawinta qeexidda shahaadada tallaalka ee loo baahan yahay furitaanka xuduudaha iyo kordhinta safarka adduunka ”
Agaasimaha guud iyo agaasimaha guud ee IATA, Mr. Alexandre de Juniac, ayaa yiri: “Diyaaradda Qatar Airways ee gebi ahaanba geynaysa IATA Travel Pass waa guul muhiim u ah dib u bilaabista isku xirnaanta adduunka. Dawladuhu waxay ubaahanyihiin tijaabooyin ama shahaado talaal si ay awood ugu yeeshaan safarka iyo barnaamijka safarka ee IATA wuxuu ka caawiyaa dadka safarka ah inay si aamin ah oo ku haboon u maareeyaan una soo gudbiyaan aqoonsigooda. Dhamaan rakaabka isticmaalaya IATA Travel Pass waxay ku kalsoonaan karaan in xogtooda la ilaaliyo dawladuhuna waxay ku kalsoonaan karaan in "OK safarka" macnaheedu yahay aqoonsi dhab ah iyo aqoonsi la xaqiijiyay labadaba. "
Qatar Airways ayaa noqotay diyaaraddii ugu horreysay ee caalami ah ee adduunka gaarta si loo gaaro sumcadda 5-Star COVID-19 Qiimaynta Badbaadada Duullimaadyada ee shirkadda caalamiga ah ee qiimeynta gaadiidka hawada, Skytrax. Tani waxay daba socotaa guushii ugu dambeysay ee HIA oo ah garoonkii ugu horreeyay iyo kan keliya ee Bariga Dhexe iyo Aasiya ee la siiyo Skytrax 5-Star COVID-19 Qiimeynta Badqabka Madaarka.